Trolleybus | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
Sanliurfa TRAMBUS စီမံကိန်းဖြစ်သွားဘာလဲ?
လူသိများသည့်အတိုင်းမြွေ၏ဇာတ်လမ်းသည်နိဂုံးချုပ်။ မရနိုင်သောဘာသာရပ်များတွင်အသုံးပြုသောဝေါဟာရဖြစ်သည်။ အလုပ်၏နှောင့်နှေး, ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်အစီအစဉ်ကိုမှလာနှင့်ပျက်ကွက်မှုကိစ္စများတွင်ဂတိတော်ဖြစ်ပါတယ်။ lanlıurfa၏လူများ [ပို ... ]
Malatya Metropolitan မြူနီစီပယ်ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ (MOTAS) မော်တော်ယာဉ်များသည် Eid al-Adha ကာလအတွင်းနိုင်ငံသားများအားအခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုပေးလိမ့်မည်။ 11 - 14 Eid al-Adha နိုင်ငံသားများကိုသြဂုတ်လနှင့် 2019 အကြားကျင်းပလိမ့်မည်။ [ပို ... ]
Malatya အခမဲ့အတွက် yks'y ယူမည်သူကျောင်းသားကျောင်းသူများမှဘတ်စ်ကား
15 - 16 ဇွန်လတွင် YKS သို့ဝင်ရောက်မည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသည် Metropolitan Municipality ၏အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှစာမေးပွဲဝင်စာရွက်စာတမ်းကိုပြသခြင်းအားဖြင့်အခမဲ့အကျိုးခံစားရမည်။ ယခုတနင်္ဂနွေတွင်ကျင်းပမည့် Malatya Metropolitan Municipality, အဆင့်မြင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများ [ပို ... ]
Malatya အခမဲ့များတွင်နေ့ပထမဦးဆုံးနေ့ဘတ်စ်ကားနှင့် TRAMBUS
Malatya Metropolitan Municipality မှMOTAŞပိုင်ဘတ်စ်ကားများနှင့် trumbus များအထူးသဖြင့် Ramadan ပထမနေ့တွင်အခမဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုများပေးလိမ့်မည်။ 4-6 ဇွန် 2019 ကိုအကြားကျင်းပမည် [ပို ... ]
Bozankayaတူရကီတွင်ထုတ်လုပ်သော Trambus များသည်မေလတွင်lanlıurfaလမ်းများပေါ်တွင်ရှိသည်
ကုမ္ပဏီ Trambus စီမံကိန်းကြောင့်တက်ရောက်ခဲ့သည်ပြီးခဲ့သည့်ညီလာခံအစည်းအဝေးတွင်Şanlıurfaမြို့တော်ဝန် Nihat Çiftçiလုပ်ပိုင်ခွင့်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုအတွက်တိုးဖို့အချိန်တန်အပေါ်ပြီးစီးခဲ့မရနိုင်ပေမယ့်မေလထဲမှာtarmbüsကယ်နှုတ်တော်မူပါလိမ့်မယ်, သူကပြောသည်။ [ပို ... ]
အဆိုပါ Trackless ပုံဖမ်းတွန်းလှည်းမြောက်အမေရိကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပထမဦးစွာစမ်းသပ် Drive တွင် Start
တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၏ပထမဆုံးသော Trolley-выглядသည့်တွန်းလှည်းယာဉ်သည်မောင်းသူမဲ့မောင်းနှင်မှုနည်းပညာနှင့်တပ်ဆင်ထားသော Harbin တွင်စမ်းသပ်မှုခရီးစတင်ခဲ့သည်။ Trolley သည် 30 မီတာရှည်လျားပြီးတစ်နာရီလျှင် 70 ကီလိုမီတာကိုအရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ Old အမျိုးအစားများ [ပို ... ]
Sanliurfa Expired TRAMBUS2လစဉ်တိုးချဲ့!
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 70 ပေါင်သန်းကုန်ကျနှင့်အခြေခံအဆောက်အ ဦ များ, တိုင်များ, မှတ်တိုင်များ, စွမ်းအင်ဝါယာကြိုးများအတွက် 35 ပေါင်သန်းသုံးစွဲသည်သော trambus စီမံကိန်းအတွက်2လစဉ်အပိုဆောင်းကာလ [ပို ... ]
TRAMBUS လက်ငင်း Malatya အတွက် လိုက်. အဖြစ်
Malatya မြို့တော်ဝန်HacıUğur Polat သည် Trambus ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစင်တာသို့ သွားရောက်၍ MOTAŞအထွေထွေမန်နေဂျာ Enver Sedat Tamgacıထံမှသတင်းအချက်အလက်များကိုရရှိခဲ့သည်။ လယ်ပြင်၌ 158 ကင်မရာနှင့်အတူလိုင်းတွင် [ပို ... ]
Tools များစစ်ဆေးခြင်း Mota ပိုးသတ်ဆေး
ဖောက်သည်များ၏စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအမြင့်ဆုံးရရှိစေရန်MOTAŞသည်ခရီးသည်များကိုသန့်ရှင်းသောနှင့်သန့်ရှင်းသောပတ် ၀ န်းကျင်တွင်သယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်အသေးစိတ်သန့်ရှင်းရေးအပြင်ယာဉ်များကိုနေ့စဉ်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ အသီးအသီး [ပို ... ]
Sanliurfa TRAMBUS စီမံကိန်းဝန်ဆောင်မှု2လနှောင့်နှေးရိုက်ထည့်ပါဦးမည်
lanlıurfa Metropolitan Municipality Sanliurfa တွင် Trambus စီမံကိန်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ lanlıurfaမြို့ပြမြူနီစီပယ်ဒုတိယအတွင်းရေးမှူးချုပ် M. Can Hallaçသည် Trambus စီမံကိန်း၏ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သောŞanlıurfa Metropolitan Municipality AS သို့သွားရောက်ခဲ့သည်။ သာ။ ကြီးမြတ်မြူနီစီပယ် [ပို ... ]
၀ န်ကြီး Varank၊ BozankayaEco-Friendly ဘတ်စ်ကားကိုစမ်းသပ်သည်
စက်မှုနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီး Mustafa Varank, Bozankaya Sileo (Silent) S10 မော်ဒယ်လ်ကားထုတ်လုပ်သောAŞသည်ဘီးနောက်ကွယ်တွင်ရှိသည်။ ကပ္ပတိန်၏ထိုင်ခုံတွင်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သောပတ် ၀ န်းကျင်ရှိဘတ်စ်ကားသည်ထိုင်ခုံနှင့်လျှပ်စစ်နှစ်မျိုးလုံးကိုအာရုံစိုက်စေသည် [ပို ... ]
Sanliurfa TRAMBUS အဘယ်ကြောင့်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုထည့်သွင်းခြင်း,
ambanlıurfaရှိအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်သို့ပူးပေါင်းခဲ့သည့် Trambus သည် Metropolitan Municipality မှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေဖို့နောက်တဖန်မကစားခဲ့ပါ။ 21 ကိုနိုဝင်ဘာလမှာစတင်မယ် လွန်ခဲ့သောအချိန်ကŞanlıurfa Nihat Çiftçi၏မြို့တော်ဝန်က [ပို ... ]